ကလိုစေးထူး: China Earth Quake Vs Myanmar Cyclone
ပုံတွေကို ကြည့်ပြီး တော်တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ် အစ်ကို အောက်ဆုံးက ရေရင် ဒုတိယမြောက်ပုံက ကျက်သရေအတုံးဆုံးပဲ သူများနိုင်ငံက လူကြီးက လူစိတ်ရှိပေမယ့် ကျနော်တို့ ဆီက -ွားကြီးကတော့ အပြုံးမပျက်ပဲနဲ့မဲထည့်နေတာ သေလည်းမသေနိုင်ဘူးးးးးးးးးး
May 22, 2008, 2:17:00 AM
Three Goals of Burma Patriotic Army! (Turt Ma Daw Ei A Yay Thone Par)
1) Kill my own people!
2) Kill my country's future!
3) NOT Kill myself.
May 22, 2008, 3:11:00 AM
May 30, 2008, 6:20:00 PM